Faka telo nanosika ny hala-tahaka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy azo lalovam-potsiny ity resaka fangalarana tahaka ity. Betsaka ireo nijapy azy tahaka ny maro nijapy train tamin’ny fotoan’androny. Azonao antsaina ity resahiko ity. Ilay andalan-tsoratra nalaina tao amin’ny kabarin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina no tiana hambara. Andalan-teny vitsy izay toa nalain-tahaka tao amin’ny kabarin’i Sarkozy tamin’ny 2007 izany. Fony “Sarko” nilatsaka tao amin’ny antoko UMP mba ho fidina ho kandidan’ity antoko ity. Tany Frantsa izany no nitranga. Ampahany fohy raha oharina amin’ny kabarin’ny filoha Rajaonarimampianina io mitovy io. Roa minitra mahery kely amina kabary naharitra 30 minitra. Atolotra eto ireo andalan-teny mitovy ireo. Ity ny kabarin’i Sarkozy “Je demande à mes amis qui m'ont accompagné jusqu'ici de me laisser libre, libre d'aller vers les autres, vers celui qui n'a jamais été mon ami, qui n'a jamais appartenu à notre camp, à notre famille politique qui parfois nous a combattu. Parce que lorsqu'il s'agit de la France, il n'y a plus de camp. Je demande à vous tous de comprendre que je ne serais pas que le candidat de l'UMP…”
Ity kosa ny kabarin’ny Filoha Rajaonarimampianina : “Je demande donc à mes amis de me laisser libre, libre d’aller vers les autres, libre d’aller vers celui qui n’a jamais été mon ami, qui n’a jamais appartenu à notre clan, à notre famille politique et, parfois même, qui nous a combattu. Car lorsqu’il s’agit de Madagascar, il n’y a plus de camp. Je vous demanderai de comprendre que je ne serai pas le Président des partis ; que je ne serai pas le Président d’une Région mais que je suis le Président de tous les Malgaches…”
Mitovy fa tsy sahala… hoy ilay adaladala.
Mbola nisy ireo nahatsikaritra fa misy ampahany kely hafa nalaina tamin’ny kabarin’ny Filoha Obama.
Ity ny ampahany tamin’ny kabarin’i Obama (2009) “Ce qui est requis aujourd’hui, c’est un retour à ces vérités. Ce qui nous est demandé maintenant, c’est une nouvelle ère de responsabilité, une renaissance…”. Ity kosa ny an’ny Filoha Rajaonarimampianina “ Ce qui est requis aujourd’hui, c’est un retour à ces vérités. Ce qui nous est demandé maintenant, c’est une nouvelle ère de responsabilité, une renaissance…” Tena mitovy no sahala… hoy ilay adaladala.
Misy ireo milaza fa ampahany fohy kely io ve dia hanaovana resabe ? Tsaroana ny resaka nataon’ilay mpiandry tsato-kazo (amin’ny baolina kitra) : “Vao nanomboka iray minitra dia maty ny baolina tao amiko. Niady mafy izahay nandritra ny 89 minitra. Occasion izany, occasion izany… saingy tsy nahafaty izahay”. Inona no tadidinareo mpanao gazety sy mpiresaka ary mpijery baolina ? “Ilay baolina maty tao anatin’ny segondra vitsy vao nanombohan’ny lalao no tadidin’ny rehetra” hoy izy. Marina ny azy. Tsy ny fotoana lava na fohy no inona fa ny vesatry ny vokatra. Fanalam-baraka ny filoha amperin’asa iray izao fangalarana ny andalan-teny izao.
Manampy trotraka ihany koa ny zava-misy satria mbola maro no misalasala ny amin’ny fahamarinan’ny voka-pifidianana. Efa io no ara-dalàna saingy… mitoetra ao an-tsaina ilay fivoizana ny fisian’ny hosoka bevata. Mahita izao kabary misy ampahany nalaina tsy nierana tamin’ny tompony (plagiat : halatra, hosoka) dia mitamberina avy hatrany ny ahiahy. Dia ho sanatria lany tamin’ny hosoka tokoa ve ?
Nilaza ny ao amin’ny fiadidian’ny Filoha Rajaonarimampianina fa efa noroahina ilay nanoratra iny kabary iny. Mipetraka any an-dafy hono… Fa nankaiza ireo havanana amin’ny fandraisam-pitenenana ? Efa mahazo vahana ange ny fahaizana mikabary e ! Feno ireo sekoly manofana sy mampianatra kabary an-kasoavana sy an-karatsiana ary an-kavoriana. Nankaiza izy ireny ? Fa angaha tsy niomana ny filoha izay efa nanana andro maro nanoratana izay heviny ?
Eo indrindra isika. Raha olona novolavolain’ny antoko politika no lany ho filoham-pirenena dia efa antaonany maro no nandre sy nanoratra kabary politika arakaraka ny vanim-potoana handraisana fitenenana. Ny antoko ihany koa mba efa manana olona novolavolaina manokana hanoratra ireny kabary ireny. Manana ny mampiavaka azy ny kabary politika tahaka ny fisian’ny mampiavaka ny kabary am-panambadiana. Tsy vitan’ny mandray fitenenana ny mikabary politika amina vanim-potoana manokana indrindra main’ny fotoam-pianianana. Tokony ho raisin’ny antoko rehetra ho lesona izao zava-mitranga izao. Tsy mitrebona avy amin’ny tsy misy akory ny mpikabary politika. Raha nahazo tehaka im-pito ilay kabary politika dia satria nisy tao nianatra, niofana, niomana, nitolona sy nandany mondron-kery hampandresy hevitra. Hevitra no hamidy rehefa manomana sy manoratra kabary politika. Tsy mahagaga raha maka ny an’ny hafa fotsiny ihany izay nanoratra an’iny satria tsy niomana amin’izany izy.
Farany, izao tranga izao dia hahatarafana fa izao ekipa miakatra eo izao dia mbola ekipa hanjifa ny zava-bitan’ny hafa fa mbola tsy ekipa hamorona. Kanefa dia maro ny Malagasy manana talenta amin’ny famoronana ary miandry ny fandrisihan’ny mpitondra eto aminy. Mifohaza ry mpitondra !